CHIN RAM RALZAM UMNAK AH NAM SAWHNAK A CHUAK, PAKHAT A THI – The Chinlung Post
Chin ramkulh ralzam hna i dornak hmun ah nam sawhnakachuak minung pakhatanunnakaliam. Chin ramkulh Paletwa ralzam hna i dornak hmun ah nam sawhnakachuak i, minung pakhatanunnakaliam. Nizan August ni 25 zanlei ah Pa pakhat cu nam in sawhasi i,anunnakaliam tiah theihasi. A nunnakaliammi hi Hnamahda khuami Pu Min Ooasi.
Tlamtling Tein Kawlca in relchih: ပလက်ဝစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင်ဓားထိုးမှုဖြစ်ပွား၍ တစ်ယောက်သေဆုံး, ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့၊ မြို့မရပ်ကွက်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွင် သြဂုတ် -၂၅ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသားတစ်ဦး ဓားထိုးခံရပြီးသေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ သေဆုံးသွားသူမှာ နှမဒါကျေးရွာမှ ဦးမြင့်ဦး (၆၅ နှစ်)ဖြစ်ပြီး ဓားထိုးမှုကျူးလွန်သူမှာ နန်းချောင်းဝကျေးရွာသား ဦးထွန်းအေးဟု သိရသည်။
ဓားထိုးခံရတာဟုတ်တယ်။ အရက်သောက်ကြပြီး အချင်းချင်းစကားများပြီးဖြစ်သွားတာလို့ကြားတယ်” ဟု ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးက ပြောသည်။ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် အေအေလက်နက်ကိုင်တို့အကြား ယခင်ကဖြစ်ပွါးခဲ့သော တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ရှိနေသည်။